Outlook neMicrosoft Exchange dambudziko muIOS Mail rakagadziriswa | IPhone nhau
Outlook neMicrosoft Exchange dambudziko muIOS Mail rakagadziriswa
Mazuva mashoma apfuura takataura nezvedambudziko raive richipengesa vashandisi vazhinji, zvakare dambudziko iri rakanangana neMail, iri mubvunzo kuti ndeimwe yeakanyanya kurongedzwa echizarira eApplication ese enguva, kana imwe yeaya anowanzo tenderera. kukurumidza kutsiviwa nevashandisi. Nekudaro, pakupedzisira Apple yaona zvakakodzera kugadzirisa dambudziko rakabata vazhinji vashandisi.
Ivo vakataurirana kuti ivo vawana zasi kushanda uye izvo zvavakaita, neyekupedzisira zuro, iOS 11.0.1 yakanyatsogadzirisa dambudziko rakaita kuti Mail isabvumirane nenzira kwayo nemaseva eemail eMicrosoft, ese maviri Shanduko uye Outlook uye Hofisi 365.
Isu tanga tichiedza kutarisa kuti ndedzipi nhau chaidzo dzinovanzwa iOS 11.0.1, uye chokwadi ndechekuti isu takanyanya kuwana mhinduro kudambudziko diki reLAG mubhobhoyo iro iro ivo vakakwanisa kugadzirisa nekukurumidza, zvisinei, hazviite kunge kusarongeka kwakaipa kwemabhuru emeseji muWhatsApp kwagadziriswa, pamwe neimwe nyaya inonetsa, yebhatiri. Ichokwadi kuti bhatiri rine iOS 11.0.1 rakavandudza zvishoma, asi richiri kure kure nekupa mashandiro atanga tichiwana muIOS 10.3.3.
Ngazvive zvakadaro, meseji iyo yakatiyeuchidza izvozvo «Tsamba yacho haina kutumirwa. Meseji yarambwa neserver «. Zvirinani timu yeCupertino yakavimbisa kuti yanga ichishanda pamwe neMicrosoft kugadzirisa dambudziko iri uye zvave zvakadaro. Aya marudzi ematambudziko neemail anogona kukuvadza zvakanyanya vashandisi vazhinji veIOS vanosarudza kushandisa Mepu semaneja wavo wenguva dzose, Sezano rako pachako, tora mukana weSpark, Outlook kana Newton senzira dziri nani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Outlook neMicrosoft Exchange dambudziko muIOS Mail rakagadziriswa
Podcast 9 × 04: Iyo iPhone X inopfuura iyo iPhone 8
Apple inosimbisa kuti iyo iPhone 8 ine dambudziko ne headset